( scene2ataboard - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: ( scene2ataboarding house ) (Inglés - Birmano)
impossible to split more than one song atatime
ဝူဟန်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သော ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများအား ဘရာဇီးလီယာမြို့အနီးရှိ စစ်တပ်အခြေစိုက်နေရာတစ်ခုတွင် သီးသန့်ခွဲခြားထားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
migrant children from myanmar ataunited nations advocacy event in malaysia.
မလေးရှားရှိ ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ ထောက်ခံအားပေးမှုပွဲတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်း ကလေးများ။
အပျော်စီးသင်္ဘောလုပ်ငန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုဒဏ်သည် တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသော အဆင့်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေသည်။
even in the digital age, women journalists in latin america work atasystematic disadvantage.
ယနေ့ ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာခေတ်တွင်ပင်လျှင် လက်တင်အမေရိကမှ အမျိုးသမီး သတင်းထောက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အခွင့်မသာပဲ ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်လည်း၊ စက်ကို ပစ်ဟန်ပြု၍၊ ထိုကျောက်နားသို့ မြှားသုံးစင်းပစ်မည်။
christian mark bleur took this photo atahalloween party this week in qurghonteppa, southern tajikistan.
ခါဂန်တယ်ပါရှိ ဟယ်လိုဝင်းပါတီတစ်ခုတွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တစ်စီးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တွင် အော့ကလန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ခရီးသည်များ(ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအချို့နှင် ပစိဖိတ်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားအချို့ အပါအဝင်) အား အော့ကလန်မြောက်ပိုင်းရှိ ဝှမ်ဂါပါရိုရာ ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတွင် သီးသန့်ခွဲခြား ထားရှိခဲ့သည်။
the observed trends in the cumulative incidence of covid-19 suggest that the pandemic is progressing atacomparable speed in all countries.
လေ့လာစောင့်ကြည့်ထားသည့် covid-19 တိုးတက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း အလားအလာများအရ နိုင်ငံအားလုံးတွင် ကပ်ရောဂါသည် ပြန့်ပွားမှုနှုန်းတူညီစွာဖြင့် မြင့်တက်လာနေသည်ဟု ညွှန်ပြထားသည်။
ရောဂါကူးစက် နိုင်ချေရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်၍ သီးခြားခွဲထားခြင်းသည် အလုပ်သမားများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ဧည့်သည်များ နှင့် အလုပ်ခွင်ရှိ အခြားသော သူများကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါသော အဆင့် ဖြစ်သည်။
လိင်အခြေပြု ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုများ၊ ဆေးလိပ်သောက်နှုန်း ပိုနည်းမှုနှင့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများတွင် ငယ်ရွယ်ချိန်တွင် သွေးတိုးရောဂါ ကဲ့သို့ ပူးတွဲရောဂါ ရှိနေတတ်ခြင်းတို့က အမျိုးသားများတွင် အသေအပျောက်နှုန်း ပိုများစေခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
these preliminary findings suggest that in the united states, persons with underlying health conditions or other recognized risk factors for severe outcomes from respiratory infections appear to be atahigher risk for severe disease from covid-19 than are persons without these conditions.
ဤကနဦး တွေ့ရှိချက်များအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှိရင်းစွဲ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါများ၏ ပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးကြောင့် အခြား သိသာထင်ရှားသည့် ရောဂါအန္တရာယ်ရှိသူများသည် အဆိုပါ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ မရှိသူများထက် covid-19 ကူးစက်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရနိုင်ခြေ ရှိသည်သူ သိရသည်။
လာ​ပတ်(ဇ်)တွင် ရေ​ဒီ​ယို​သတ္တိ​ကြွ ယူ​ရေ​နီ​ယမ်​များ ဖမ်းဆီး​ရမိ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ဘိုလီးဗီးယန်းတာဝန်ရှိသူများသည် ယူရေနီယမ် (သို့) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်သတ္တုများဟု ယူဆရသော သတ္တု ၂ တန်အား ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ (covid-19) ကူးစက်မှုများ တိုးပွားဖြစ်ထွန်းလာမှု အညွှန်းကိန်းက ဥရောပသမဂ္ဂ/ဥရောပတခွင် စီးပွားကူးသန်း နယ်နိမိတ် နိုင်ငံများနှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့တွင် အလားတူ ဖြစ်စဉ်များ ရှိကြောင်း ပြသနေကာ တိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအဆင့်တစ်ခုဖြင့် covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည် နိုင်ငံအားလုံးတွင် လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာနေကြောင်းကို အတည်ပြုနေပါသည်။
former united nations worker kaori izumi called fora"vote for solidarity" in order to change japan's policies around nuclear energy atagathering of fukushima women on august 29, 2012.
ဩဂုတ်လ(၂၉)ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ဖူကူရှီးမားအမျိုးသမီး တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာ အဏုမြူစွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂျပန်ရဲ့ ပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် စုစည်းတဲ့အဖွဲ့ကို မဲပေးဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းဟောင်း ခါအိုရီ အီဇုမိက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
que guapos (Español>Italiano)bottle ka pani khatam hogya tha (Hindi>Inglés)tapioca flour (Inglés>Tagalo)veronicion (Francés>Neerlandés)himmelske (Noruego>Croata)principis (Latín>Serbio)some heart understand each other (Inglés>Hindi)menanam pokok (Malayo>Árabe)det har sikkert du og (Noruego>Español)maksud didera dalam inggeris (Malayo>Inglés)tapalan ang butas ng maayos (Tagalo>Inglés)マヤnalang (Italiano>Tagalo)bạn đã làm xong chưa (Vietnamita>Inglés)chismosa in japanese word (Tagalo>Japonés)why do you want to know (Inglés>Hindi)boleh saya tahu siapa awak (Malayo>Inglés)订做 (Chino (Simplificado)>Inglés)maksud to be held on (Malayo>Inglés)can i call you right now hindi translation (Inglés>Hindi)is social media my friend (Inglés>Afrikaans)soon cuddle with you (Inglés>Tagalo)患者さんだ (Japonés>Inglés)essay on sainik jivan (Inglés>Gujarati)battezzo (Italiano>Español)insert probe tip to root level (Inglés>Alemán)